Mogadishu Journal » Dowladda Itoobiya oo sheegtay in ay dhax-dhaxaadineyso dowladda federaalka iyo maamul gobolleedka Puntland
Mjournal : — Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wado qorshe la doonayo in lagu soo afjaro khilaafka baahsan ee ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul gobolleedka Putland, kadib markii ay dhawaan dowladda Itoobiya ku guuleysatay in ay soo afjarto khilaafkii in mudo ahba ka dhax jiray maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
War laga soo saaray xafiiska ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegne ayaa lagu sheegay in xiligan la qorsheenayo sidii xal looga gaari lahaa is darrada iyo khilaafka siayasadeed ee u dhaxeeya dowladda faderaalka Soomaaliya iyo Puntland oo siweyn isugu khilaafay dooda ka taagan isbadal sida la sheegay lagu sameeyay dastuurki Ku-meel-gaarka ee dalka u yaala oo ay Puntland dowladda ku eedeyso inay qoddobo ka badashay.
Waxaa uu ra’iisal wasaaraha warbixintiisa ku sheegay in ay doonayan in xal laga gaaro kilaf kasta oo dhex yimaada dhinacyadda Soomaalida,waxana uu hadalkiisa kusoo qadey inay xiligaan ay qorsheynayan sidii xal looga gaari laha ismarin waaga siyaasaded ee ka dhex jira dowladda faderaalka iyo Puntland.
Dhawaan ayeey aheyd markii ay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku kulmeen madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland C/raxmaan Sheekh Max’ed Faroole iyo ra’iisl wasaaraha dalka Itoobiya oo isla soo qaaday khilaafka Puntland kala dhaxeeya dowladda federaalka.
Ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya ayaa rajo badan ka muujiyay is faham laga gaaro khilaafka labada dhinac, waxaana uu soo hadal in ay is arkeen hoggaamiyaasha labada dhinac ayna balsanyihiin.
Warka ka soo baxay ra’iisal wasaaraha dalka Itoobiya waxaa uu ku soo aadaya iyaddo Puntland sharuudo ku xirtay wada-hadal ay lagasho dowladda faderaalka Soomaaliya,waxaana ay Puntland horay u sheegtay in ay wada-xaajod la furi doonan dowladda faderaalka mar ay ka noqoto isbadalka ay Puntland ka cabaneyso ee lagu sameeyay dastuurka.